Uncategorized Archives - MM Live News
ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျနတေဲ့ မိခငျကေ မှးဖှားတဲ့ ကလေးမှာ ဗိုငျးရပျဈပိုး မတှရှေိ့ ဟုဆို…
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေတဲ့ မိခင်ကေ မွးဖွားတဲ့ ကလေးမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မတွေ့ရှိ ဟုဆို အမျိုးသမီး #coronavirus # အဆုတ်ရောင်သည်ကျန်းမာသောကလေးမွေးဖွားသည် coronavirus (2019-nCoV) အဆုတ်ရောင်ရှိသည့်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဟိုင်လောင်ဂျန်ပြည်နယ်တွင်ကျန်းမာသောကလေးကိုမွေးဖွားပေးခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့တွင်အမှတ် ၆ ဆေးရုံဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Na Hui သည်ထိုအမျိုးသမီးသည်ကိုယ်ဝန် ၃၈ ပတ်တွင် ၃၇.၃ ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်စ်ဖျားနာခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများပြုလုပ်သော coronavirus ဝတ္ထု (冠状病毒guānzhuàngbìngdú) ကိုစမ်းသပ်မှုပြုခဲ့ချိန်တွင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်။ ပြည်နယ်မြို့တော် Harbin City ၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်တနင်္လာနေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။ဆရာဝန်များကသူ့ကို cesarean ခွဲစိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်ပင် ၃ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသောမိန်းကလေးတစ် ဦး သည်ထိုနေ့တွင်ပင်ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သောကြာနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ကလေးငယ်သည် coronavirus ဝတ္ထုကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။တနင်္ဂနွေနေ့တွင်မိခင်၏ခန်ဓာကိုယ်အပူချိန်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟု Na ကပြောကြားခဲ့သည်။ မိခင်ရောကလေးရောပါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ (观察guānchá) နှင့်ကုသမှု (治疗zhìliáo) အတွက်အထူးဆေးအဖွဲ့ ၂ […]
ယူကရိနျးလယောဉျပကျြကမြှုသညျ အီရနျ၏ ဒုံးကညျြ ထိမှနျခဲ့၍ဖွဈကွောငျး သကျသဗေီဒီယိုဖိုငျထှကျပျေါ
ယူကရိန်းလေယာဉ်ပျက်ကျမှုသည် အီရန်၏ ဒုံးကျည် ထိမှန်ခဲ့၍ဖြစ်ကြောင်း သက်သေဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ် အီရန်နိုင်ငံ တီဟီရန်လေဆိပ်မှ ပျံတက်ပြီးနောက် မကြာမီ ပါရန်မြို့ ငယ်လေး၏ လယ်ကွင်းများအတွင်း ပျက်ကျသွားခဲ့ကာ လိုက်ပါလာသူ ၁၇၆ ဦးစလုံး သေဆုံးခဲ့သည့် ယူကရိန်းခရီးသည်တင်လေယာဉ်ပျက်ကျမှု့သည် အီရန်၏ဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့၍ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်သတင်းဌာန New York Times က ဖော်ပြလိုက်သည်။ New York Timesက ကြာသပတေးနေ့က ၎င်းတို့ ရရှိသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်သက်သေနှင့်အတူ ဖော်ပြခြင်းဖြစ် သည်။ အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်အရ လေယာဉ်ကို ဒုံးကျည်တစ်စင်းထိမှန်ခဲ့သည်မှာ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေပြီး ဗီဒီယိုဖိုင်သည်လည်း ကမ္ဘာ့မီဒီယာအသီးသီးနှင့် လူမှူ့ကွန်ရက်များတွင် ပျံ့ နှံ့သွားပြီဖြစ်သည်။ ယူကရိန်းလေကြောင်းလိုင်းမှ ဘိုးရင်း ၇၃၇-၈၀၀ အမျိုးအစား Flight ၇၅၂ သည် ယူကရိန်းနိုင်ငံကိဗ်ယက် မြို့သို့သွားရန် တီဟီရန် လေဆိပ်မှပျံတက်ပြီး မကြာမီ […]
လမျးလြှောကျရငျး ကလေးထှကျကတြော့ ကလေးကို ပှေ့- ခကျြကွိုးတနျးလနျးကို လကျကကိုငျပွီး ဆေးရုံကို လမျးလြှောကျပွီးသှားတဲ့မိခငျရဲ့အဖွဈ
October 20, 2019 MM Live
လမျးလြှောကျရငျး ကလေးထှကျကတြော့ တဖကျက ကလေးကို ပှေ့- ခကျြကွိုးတနျးလနျးကို လကျက ကိုငျပွီး မိခငျဟာ ဆေးရုံကို လမျးလြှောကျပွီး သှားပါသတဲ့…( တှေးကွညျ့တာနဲ့တငျ ထိတျလနျ့စရာ ) သုံးပေါငျ မပွညျ့တဲ့ ကလေးကို ဆေးရုံက တလအကွာ ပွုစုစောငျ့ရှောကျပေးခဲ့တယျ….ဒါပမေယျ့ ဝမျးရေးမပွလေညျတဲ့ မိခငျက ဆေးရုံဆကျမတကျခငျြတော့လို့ထှကျပွေးလာ သတဲ့…. ဈေးထဲရောကျတော့ ဒီကလေးကို မှေးမယျ့လူရှိ ယူကွပါ – ကမြလကျထဲထားရငျ မပွလေညျတဲ့ ဒုက်ခတှနေဲ့….ဒီကလေး သရေပါလိမျ့မယျတဲ့….( မိခငျစိတျနဲ့အရူးမီးဝိုငျး လိုကျပေးနတေယျ – နောကျဆုံး ကွံရာမရရငျတော့ သူ့စိတျထငျရာလုပျပလိုကျမှာပါ ) ကြှနျတျောရောကျသှားတော့ ဈေးဆိုငျ တှရေဲ့မလှမျးမကမျးဆီက ဓမ်မံတေးသံတှကေို ကွားရတယျ – sunday ရကျ…..ဘုရားရှိခိုးသူတှေ နဲ့ခပျလှမျးလှမျး ခရဈယာနျဘုရားရှိခိုးကြောငျးကနကွေညျနူးဖှယျ ဓမ်မတေးသံသာတှပြေံ့လှငျ့လာနတေယျ -( ဟာလလေုယာ ) […]
May 28, 2019 May 28, 2019 MM Live News
ရခိုင် ​မှာ တိုင်းပြည်​တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရင်း ငယ်​ငယ်​ရွယ်​ရွယ်​​လေးနဲ့ အသက်​​ပေးလှူသွားပြီဗျာ မိသားစုနဲ့ထပ်​တူ​ကြေကွဲရပါတယ်​။စစ်​ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး က​လေးခရိုင်​ မင်း​ကင်းမြို့နယ် ​တောင်​တွင်းေ​ဒသ ကြာပင်​ရွာမှ ဦးတိုး​ကျော်​-​ဒေါ်သန်းလှတို့ရဲ့သား​ထွေး​လေး ဗိုလ်​ကြီးချမ်းသာဝင်း မ​နေ့ညက တိုက်​ပွဲကျသွားခဲ့ပါတယ်​၊ရှရှားကို ပညာ​တော်​သင်​​ရွေးချယ်​ထားခြင်းခံထားရတဲ့သူပါ၊ဒီတစ်​ပတ်​​ရှေ့တန်းကပြန်​ခဲ့ရင်​ ရှရှားကိုသွားရမှာပါ။ ငယ်​ငယ်​​လေးထဲကစ လိမ္မာပြီးစာ​တော်​တယ်​၊ မူလတန်း​ကျောင်းသား​လေးဘဝထဲကစ နွားနှစ်​​ကောင်​ကို​ရှေ့တစ်​​ကောင်​​နောက်​တစ်​​ကောင်​နဲ့ကျမတို့အိမ်​​ရှေ့လမ်းက နွား​မောင်းပြီး လယ်​​တောကိုနွား​ကျောင်းသွားတိုင်း ကျမ သူ့ကိုအမြဲစ​လေ့ရှိပါတယ်​။ လွန်​ခဲ့တဲ့တစ်​ပတ်​​ကျော်​​လောက်​ကပဲသူ့အိမ်​နဲ့ph ဆက်​​တော့ ကျမအ​မေကို အ​မေကြီး​နေ​ကောင်းရဲ့လား အ​မေကြီးကို ဂရုစိုက်​ဖို့ ကျမတို့ကိုသူကမှာတဲ့အ​ကြောင်း သူ့အစ်​မက​ပြောပြတယ်​၊မကြာ​သေးခင်​ကလည်းသူ့ရဲ့လစာထဲက သူ့အိမ်​ကို​ငွေ ၅ သိန်းလွှဲ​ပေးပြီးရွာထဲကသက်​ကြီးရွယ်​အို​တွေကို ကန်​​တော့ခိုင်းပြီးကျန်​တဲ့​ငွေကို ​ကောင်းမှုကုသိုလ်​ လုပ်​ခိုင်းပါတယ်​။ ကျမတို့ရွာက ​တောသူ​တောင်​သား​တွေရဲ့အသိ စိတ်​ဓာတ်​က ၁၀ တန်း​အောင်​ပြီးရင်​ မိဘကို​ငွေကုန်​မှာ အရမ်းစိုးရိမ်​ကြတယ်​၊ ချမ်းသာဝင်း​လေး ၁၀ တန်း​အောင်​​တော့ မိဘ​ငွေကုန်​မှာစိုး​တော့ DSA ကိုရ​အောင်​ ​ဖြေမယ်​၊ဝါသနာလည်းပါတယ်​ဆိုပြီး​ဖြေခဲ့တာ DSAလည်းရခဲ့တယ်​၊ဒီ​နေ့မှာ​တော့တစ်​ရွာလုံးဆူဆူညံညံ ငိုသံ​တွေနဲ့ […]
တိုင်းပြည်အတွက် မင်းဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲ….အသက်တောင် သူမယူလို့ ကျုပ်ပြန်ရလာတာ….သေလိုက်ရင်လည်း ကောင်းသား….
April 12, 2019 MM Live
တိုင်းပြည်အတွက် မင်းဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲ….. ဟုတ်ကဲ့ …အသွေး လည်း လှူပြီးပြီ… အသားလည်း လှူပြီးပြီ….ကိုယ်အင်္ဂါလည်း လှူပြီးပြီ….အသက်တောင် သူမယူလို့ ကျုပ်ပြန်ရလာတာ။ (သေလိုက်ရင်လည်း ကောင်းသား။) အလံကိုင် နဖူးစည်းပြီး ဆူးလေကို တစ်ပတ် ပတ်ပြမှ လူထင်ကြီးတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့…. ခင်များတို အမြင်မှာ ကျုပ်ဟာ သားနားမယ် မထင်ပါဘူးလေ။ ဒုက္ခိတဖြစ်နေလို့ ပင်စင်လေး မျှော်မိရင်တောင် ဟိုဟာကို ဒီလိုဖြတ်….ဒီဟာကို ဟိုလိုတိ ရိတိတိနှင့် ခြိန်းခြောက်တာ ခံရသေးတယ်။ ( ပင်စင် သိမ်းခံ ထိမယ်တဲ့) လုပ်စားဖို့လည်း အင်္ဂါ မပြည့်စုံ တောင်းစားဖို့ အရှိန်အဝါ မပြည့်စုံ…ဒီလူ့ဘုံ ရောက်နေမှတော့ ခါးစည်း ခံကြရုံပေါ့ဗျာ….။ သူမွေးပေးတော့ ကိုယ်အင်္ဂါအစုံအလင်ပြန်ရောက်လာတော့ မစုံမလင် ကတုန်ကရင် နွားတင်းကုတ်မှာ အမေ မျက်ရည်တွေ […]
April 10, 2019 MM Live
မုံရွာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး မှာ ဆေးရုံတက်ရင်း ဆေးဖိုးအတွက် ငွေကြေးအခက်ခဲဖြစ်နေလားကျွန်တော့် ဆီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ စီစစ်ပြီး တကယ် နွမ်းပါးလူနာဖြစ်ပါက ရေချမ်း ဆေးဆိုင်မှာ ဘေ ဖွင့်ပေးပြီး လူနာရေးရုံဆင်းသည်အထိ တာဝန်ယူပေးပါမယ်ခဗျာလက်ရှိ ကူညီပေးနေတဲ့ လူနာနှစ်ယောက်ကတော့ဆေးရုံဆင်းသွားကြပါပြီ။ လူနာနှစိဦးအတွက် စုစုပေါင်းဆေးဖိုး ၁၄၂၆၀၀ ရှင်းပေးခဲ့ပါပြီခဗျ။တကယ်ကို နွမ်းပါးပါက တကယ်ကူညီပေးပါမယ်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် မိတ်ဆွေအသိမိတ်ဆွေဖြစ်စေ မိတ်ဆွေပတ်ဝန်းကျင်မှာ နွမ်းပါးလူ တွေ့သည်ဖြစ်စေဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခဗျာ။ အကူညီလို လို့ခေါ်ရင် ပထမဦးစွာ လိုက်ကြည့်ပါတယ် လိုက်ကြည်တိုင်းတော့ မကူညီပါဘူးခဗျ ကူညီထိုက်မှ တကယ်နွမ်းပါးမှ သာ ကူညီမှာပါခဗျာ(မုံရွာ မြို့တစ်မြို့တည်းသာ) စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အထက်ပိုင်းမြို့များဖြစ်တဲ့ဖောင်ပြင် မော်လိုက် ကလေး မင်းကင်း ဟုမ္မလင်းခန္တီး အစရှိတဲ့မြို့များကနေ မုံရွာ ဆေးရုံကြီးကိုလွဲတဲ့အခါဆေးဝါးအတွက် ငွေကြေးအခက်ခဲဖြစ်ရင်လဲ ဆက်သွယ်ပါနော့ မုံရွာ ဆေးရုံကြီး ကိုသာရောက်အောင်လာခဲ့ပါ […]
အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျားဆိုပြီး ဝိုင်းလိမ်တာကို လုံးဝလက်ခံမည်မဟုတ်ဟု သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ပြော
အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျားဆိုပြီး ဝိုင်းလိမ်တာကို လုံးဝလက်ခံမည်မဟုတ်ဟု သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ပြော နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင်ပြုလုပ်သော တိုင်း အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ ဌာနဆိုင်ရာများတွင် တွေ့ဆုံပွဲတွင် အားလုံးကောင်းပါသည် ခင်ဗျားဆိုပြီး ဝိုင်းလိမ်တာကိုလက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ ”ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများအနေနဲ့ သွားတဲ့အရပ်ဒေသမှာ မည်သည့်နေရာမဆို တိုင်ကြားစာ ဌာနဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းသိချင်တယ်။ အမှန်အတိုင်းမြင်ချင်တယ်။ အမှန်အတိုင်းသိ၊ အမှန်အတိုင်း မြင်မှ အနာသိမှ ဆေးရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျားဆိုတာလို ဝိုင်းလိမ်တာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါရိုးရိုးပဲ ကျွန်တော်ပြောပါ့မယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလိုအုပ်ချုပ်ရေးမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒီလိုယန္တရားဖြစ် စေချင်တယ်”ဟု သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က ပြောသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် အုပ်ချုပ်ရေးသည် ပြည်သူကိုမျက်နှာမူသည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပြည်သူ့အကျိုးကိုမျက်နှာမူသည့် […]
နယ်ကလူတွေ အပင်ပန်းခံပြီး ရန်ကုန်ထိတက်လာစရာ မလိုတော့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်စပို့ရုံး တွေရဲ့ လိပ်စာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်စပို့ရုံးတွေရဲ့ လိပ်စာတွေကို နယ်မှာရှိတဲ့သူတွေသိရအောင် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဒါဆို နယ်ကလူတွေ အပင်ပန်းခံပြီး ရန်ကုန်ထိတက်လာစရာ မလိုတော့ပါ ရန်ကုန်-ဆရာစံလမ်း နှင့် စက်မှု (၁)လမ်းထောင့်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ နေပြည်တော် –ပခ/၄ဝ-၄၁၊ နေပြည်တော်ကောင်စီလမ်း၊ကံလှရပ်ကွက်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်။ မန္တလေး –အကွက် ၄၁၈၊ ၁၂ လမ်း၊ ၆၄ x ၆၆ ကြား၊ ဒေါနဘွားရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။ မကွေးတိုင်း –ရွာသစ်ပွဲကြိုရပ်ကွက်၊ဆေးရုံလမ်း အနောက်ဘက်၊ မကွေးမြို့။ ပဲခူးတိုင်း –အမှတ် (၁၁၁)၊ ဗန္ဓုလလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့။ ဧရာဝတီတိုင်း –သစ္စာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့။ စစ်ကိုင်းတိုင်း –ရုံးကြီးလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။ တနသာင်္ရီတိုင်း –သစ်တောရုံးလမ်း၊ ဗျောတောဝရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့။ မွန်ပြည်နယ် –အရာတော်လမ်း၊ မောင်ငံရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။ […]